Xisbi shaaciyey inuu dhex dhexaadinayo DF iyo Shabaab + Warqad loo diray Erdogan | Somalia News
Weftigii uu hoggaaminayey Madaxweyne Muuse Biixi Oo si ballaadhan loogu soo dhaweeyey saaka gobolka daad-madheedh
October 21, 2020 | Published by: yaska Oodweyne(OWN)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Weftigii uu hoggaaminayey ee maalmahan ku jiray safarka shaqo ee qaar ka mida gobolada Dalka ayaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyey saaka gobolka daad-madheedh iyo degmaada Ceel-bilcille, Ceel-same iyo magaalo madaxda gobolka Daadmadheed ee Oodweyne. LA WADAAG ASXAABTAADA Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on WhatsApp (Opens in new window) Click to share on LinkedIn (Opens in new window) Click to share on Telegram (Opens in new window) Click to print (Opens in new window)
COVID-19 oo ku soo labo kacleeyey Jabuuti iyo go’aan ka soo baxay dowlada
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp - Advertisement - Jabuuti ayaa mar kale xirtay xudduudaheeda kaddib markii uu soo laba kacleeyey cudurka Coronavirus. Waxaa maalmihii la soo dhaafay dalkaas laga diiwaan geliyey kiisas badan, War ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Jabuuti ayaa lagu sheegay in xadduudaha dhanka dhulka la xirayo muddo 15 maalmood ah, si loo xakameeyo faafitaanka cudurka. Jabuuti waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee uu sida ba`an ugu faafay COVID-19, hase yeeshee dadaal ay dowladdu sameysay ayaa lagu sheegay inay yaraadeen kiisaska, muddooyinkii ugu dambeeyay. Bilihii ugu dambeeyay xanuunka coronavirus ayaa ka dabar go`ay dalkaas, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka. Warbixintii ugu dambeysay ee wasaaradda ayaa lagu sheegay inaysan jirin kiisas cusub, isla markaana dhammaan dadka uu ku dhacay ay ka bogsadeen. Balse shalay oo keliya ayay wasaaraddu shaacisay 30 kiis oo cusub, taasoo dhalisay walaac cusub oo la xiriira in cudurka uu mar kale soo labo kacleeyey. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement - Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Previous article(Sawirro) Muxuu yahay sharciga cusub ee uu ansixiyey Baarlamanka Galmudug?
51 Guurada Kasoo Wareegtay Kacaankii Oktoobar Iyo Jidkii Qodxaha Badnaa
October 21, 2020 | Published by: yaska Markii la dilay Madaxweynihi Somalia C/rashiid Cali sharmarke (AHN)1969kii ayaamo ka dib waxa xukunkii gacanta ku dhigay koox sarakiil ah oo uu Hogaaminayay S/G Maxamed Siyaad barre,maalintan waxa loo yaqaan maalinta geerida umadda Somaliya waana maalin madow waxa loo tiriyaa inay tahay maalinta dhashay wax alla waxa dhibaato Somalia ka dhacday ee taagan ilaa manta. Xukunkii Siyaad barre maalintii uu inqilaab military kula wareegay Dalkii la odhan jiray Somalia isla maalintiiba waxa uu masaxay xisbiyadii dalka ka jiray,waxa la mamnuucay Xorriyaddii hadalka,waxa bilaabmay cabudhin waxa la sameyay ciidamada NSS iyo Dhabarjebinta waxana la soo saaray Xeer No 54 oo fasaxay in Ciidanka NSS ay qofkay doonan xidhaan bilaa maxkamad oo ay toorjar iyo ciqaab marin karaan,guriga ay doonan baadhi karaan qofkay doonan dili karaan,waxa kaloo la mamnuucay inay dadku shiri karaan ama ay kulmi karaan. Isla bsihii Oktoobar 1969-kii, maalmo yar kadib markii inqilaabku dhacay Digtaatoor Maxamed Siyaad Barre, waxa uu dadka kala hadlay Idaacadda, waxaannu yidhi; “Waxaannu awoodda kula wareegnay (militariga) sharafkiina iyo magaca ummadda Soomaaliyeed, waxaan idinka codsanaynaa in aad isu soo baxdaan oo aad na taageertaan, dalkiina aad dhistaan, haddii ay tahay maalkiina iyo maskaxdiinaba si aad isaga ilaalisaan in aad baryootantaan.” Kolkii hore dadku qalbi furan ayay soo dhaweeyeen hase ahatee markiiba waxa la dareemay in Somalia ay qaadday jidkii geerida,1972kii Siyaad barre waxa uu markii ugu horraysay galaaftay Saraakiishii inqilaabka socotay oo ku eedayay inay kacaanka Dabin u maleegayen waxayna kala ahaayen Colonel maxamed Caynanshe,C/qaadir dheel,iyo Salad gabayre. 1975kii ayuu soo saaray Xeerka qoyska wax la yidhaa oo jidaynaya inay ragga iyo dumarkau ka simanyihiin xagga dhaxalka waxa ka horyimi Culimo oo sheegay inay xaaraan tahay oo ay ka hor imanayso quraanka kariimka ah Gaar ahaan “Suurat al Nissa”hase yeeshee waa la dilay culimadii isagoo ka hadlaya siyaad barre wuxu yidhi “Arrintaas Waxan u bandhigay Golaha sare ee kacaanka waxana la isla afgartay inanay nimankaasi cafis mudnayn kolkaas waxay noqotay inaan go’aanka Guddiga fuliyo sidaas ayay noqotay” 1976kii ayuu ku soo shiriyay hoolka kulliyadda Jaalle siyaad la magac baxday markii danbe dad gaadhaya 3000 qof waxa uu kaga dhawaaqay xisbiga Hantiwadaagga kacaanka Somaliyed oo ahaa (X.H.K.S) siyaad barre waxa uu isku dhafay mabda’ii Shuuciga,reer galbeedka,iyo dhaqan Somali waxa uuna ka sameeyay mabda’ aan la aqoon dhinac uu la haysto oo uu ugu magac daray Hantiwadaagga Cilmiga ku dhisan. 1977kii ayuu dagaal ku qaaday Waddanka Ethiopia waxa uu doonayay inuu ku qabsado dhulka Somali galbeed imikana ah DDS ee Ethiopia waxana dagaalkaa ku dhamaaday naf iyo hanti badan waana lagu khasaaray waxana la filayaa inuu ahaa bilowgii burburka Somalia. 1978kii ayay Jabahddii Ugu horraysay Baxday oo ahayd (Somali Salvation Demoqradic Front SSDF)oo ay ka soo jeedsatay dhinaca Ethiopia waxayna dagaallo lagu hoobtay ku soo qaaadday aagga Balanbale iyo Galdogob. 1981kii ayay jabahddii SNM (Somali National Movement) ayaa baxday taas oo dagaallo soconaya 10 sanadood la gashay Ciidamadii Siyaad barre ku dhexmareen Dhinaca Somaliland dagaallo qadhaadh oo lagu hoobtay aakhirkiina keenay inay SNM gacanta ku dhigaan Somaliland. 1989kii ayay jabhaddii USC (United Somali Congress) iyaduna Xamar iyo koonfur dagaal ku qaadday waxanu siyaad barre kaare kaga baxsaday muqdisho sidaas ayuu waddankii Somalia ku burburay. Waxa lagu xusuusan doonaa jidkii geerida iyo Hogga Qodxaha badan waxana loo tirinayaa inuu ahaa xukunkaasi kii kala fogeeyay Somalida,ee qof kastaa xaggii u jeeday u dhaqaaqay. Rashiid Odawaa [email protected] LA WADAAG ASXAABTAADA
Baarlamaanka Galmudug oo ansixiyay sharci lagu dhisayo ciidamo maamulkaas uu yeesho+SAWIRRO
Xildhibaannada Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo Maanta kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen Sharciga dhismaha ciidamada Boliiska Galmudug. Kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal waxaana goobjoog ahaa wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi. Sharcigaan ayaa waxaa Baarlamaanka Galmudug u gudbiyay wasaaradda amniga Galmudug, waxaana ay uga mahad celisay guddoonka iyo xildhibaannada ansaxiyay sharcigaan oo lagu dhisayo ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug. “Wasaaradda Amniga Gudaha Galmudug waxay u mahadcelinaysaa Guddoomiyaha Barlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal, Guddiga Amniga iyo Xuduudaha iyo xildhibaanada Barlamaanka Galmudug oo maanta si aqlabiyad ah ku ansixiyey Sharciga dhismaha ciidamada Booliska Galmudug” ayaa lagu yiri war kasoo baxay wasaaradda amniga Galmudug.
October 21, 2020 | Published by: yaska Ex-wasiir Xirsi Cali Xaaji Xasan oo waqtigan ka mid ah hogaanka xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI hadalkii uu ka jeediyey xaflad Hargeisa ka dhacday maalintii Isniintii ee uu kaga hadlay xaaladaha dalka iyo safarka Madaxweynaha ee bariga, waxa uu ahaa hadal gef ah oo ka qaloocday. Xirsi waxa uu ka hadlay arinta labada diyaradood ee xaniban, horta waxaan kuu sheegayaa Xirsow in markii diyaarahadani dalka yimaadeen aad adigu ahayd wasiirka Madaxtooyada, Maxamuud Xaashina uu ahaa wasiirka Duulista, waxaad diyaaradaha ruqsadooda ku bixisay heshiis ay la soo galeen soomaliya adigoo masuul qaran ah. Hadalkaaga maanta maaha mid aad umada ku mara habaabin karto adigoo waxaa sameeyey, waxase kaa hadlinayaa waa dano dhaqaale oo aad ku qabtay. Maxaa dambi ka dhigay in la yidhaa diyaaradahan heshiis la gala Somaliland oo ogolaada qaranimadayada. Waxa xusid mudan in diyaarada Ethiopia Airlines ay ruqsada ka qaadatay soomaliland wakhtigii Madaxweyne cigaal, waxana wasiirka Duulista ahaa Cabdilaahi Maxamad Ducaale, dalkana kuma timaado ruqsad ama heshiis ay dal kale la soo gashay. Safarka Madaxweyne Muuse Biixi cabdi ee galbeedka iyo bariga ee aad ka dhex raadisay isku dhufashada iyo kala qaybinta shacabka Somaliland, waa ayaan daro in adigoo musal xisbi ah sidaa u hadasho. Madaxweyne Muuse waxa uu Borama ka soo furay biriijka camuud kaas oo bulshada Gobolka Awdal ku bogaadisay xukuumadda mana aha mid indhaha laga qarsan karo. Arinta aad ku sheegtay in Madaxweyne Muuse Gobolka Togdheer siyaasiyan kaga tagay dad gaara, qaar kalena uu ku bedelayo magaalada Oodweyne uu tagayo darteed, waxan ku shegaynaa Xirsow in adigu aad caan ku ahayd qaybinta iyo naxli la kala dhex dhigo umada soomaliland. Madaxweyne Muuse Biixi cabdi waa u sharaf inuu isku wado dadkii u codeeyay iyo kaan u codayn waxay cadaynaysaa midnimada uu ku hogaaminayo qarankan, goormay dambi noqotay in Madaxweynuhu u hoydo Oodweyne ama meel kaloo wadanka ah, miyaanay umadiisii uu xukumayey ahayn. Laakiin adigu waadigaa adoo cidlo jooga ka shaqaynaya kala qaybinta iyo isku dirka walaalaha wada dhashay ee reer Somaliland ee noo sheegay wixii aad samayn lahayd, taaga sidaasaad xil iyo madaxnimo kaga doonaysaa. Allaa kariim. Barmaamijka shaqo qaran maaha sidaad adigu fahankaaga gaaban u fahantay, balse waa aqoonyahankii dalka oo ku hubaysan aqoon ayaa waxa loo carbinayaa qarankan waxay u qaban lahayeen. Xirsiyaw maanta shacabka soomaliland waxay kaa sugayeen goorta aad gubayso bugii ay ku dugnayd taariikhda madaw ee aad ka qortay Madaxweyne silaanyo oo dadka ku baray, lagaama sugayn qaybin iyo qoqobkii aad ku so caana maashay. Xirsiyaw kolay waa la xisaabtami doonaa ee u diyaar garaw xisaabtan dhaba wixii aad dalkan u gaystay, dibna lagaga dhegaysan maayo waxaad ahayd in aad cid kale ku eedayso. WQ: Aqoonyahan Sa’da Ali Mohamed LA WADAAG ASXAABTAADA
Man United Oo Guul Wakhti Dambe Ah Ka Gaadhay PSG, Rashford Oo PSG Xasuusiyay Guushii Sanadkii Hore & Chelsea Oo Garoonkeeda Kaga Adkaan...
Kooxda Man United ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareedkeedii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan iyaga oo qaybtii hore khaatiyaan ka dhigay kooxda Boorsada weyn ee PSG. Kulanka ayaa ka tirsanaa kulankii ugu horeeyay ee champions League labada kooxood ee xilli ciyaareedkan iyada oo ay kox walba u soo gashay guul ay kala baxdo kulanka. Man United oo xasuusata guushii taariikhiga ahayd ee champions League ay garoonkan kaga gaadheen PSG ayaa kulanka u soo gashay si dar-dar leh iyaga oo u muuqdayba in ay ku ciyaarayeen garoonkooda Old Trafford. Kooxda Man United ayaa qaadaysay weeraro rogaal celis ah iyaga oo PSG u daayay hasashada kubada iyo maamulista kulanka. Dadaalkeedii iyo orodkeedii ayaa u midho dhaliyay Man United iyaga oo hogaanka u qabtay ciyaarta PSG-na kaga naxsaday gool. Daqiiqadii 24-aad ayay Man United dhalisay goolka 1-aad kadib markii rikoodhe loo dhigay khalad lagu galay xiddiga Anthony Martial. Ugu horayntii Goolhayaha PSG ee Keylor Navas ayaa raacay rikoodhada laakiin waa lagu celiyay maadama uu Goolhayuhu soo dhaafay liidka cad. PSG ayaa sii waday raadinta goolka bar-baraha laakiin Man United ayaa kala hor yimid iska caabin fiican oo dhanka daafaca ah iyaga oo waliba halis galiyay goolka PSG iyaga oo qaadayay weeraro rogaal celis ah. Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Man United soo bandhigtay qaab ciyaareedkeedii ugu fiicnaa ee xilli ciyaareedkan. Qaybtii dambe ee ciyaarta ayay PSG ku soo gashay sidii qaybtii hore iyaga oo maamulayay ciyaarta laakiin ku dhibaatoonayay in ay dhaafaan daafaca iyo Goolhayaha Man United. Laakiin PSG ayaan uba baahan in ay gool ka dhaliyaan Man United qaybtii dambe maadama ay isla iyada isku adeegsadeen in ay goolka u dhaliyaan. Daqiiqadii 55-aad ayay PSG heshay goolka bar-baraha kadib markii uu xiddiga Anthony Martial si khaldan shabaqa kooxdiisa u dhex dhigay kubada. Wixii intas ka dambeeyay Ciyaarta ayaa noqotay mid furan iyada oo labada kooxoodba sameeyeen fursado halis ah oo ay goolal ka dhalin kareen. Waxa xusid mudan in uu Goolhaye David De Gea xilli ciyaareedkan ahaa xiddiga kulanka marka loo eego badbaadino halis ah oo uu sameeyay. Wax walba oo ay PSG maamusho ciyaarta waliba samayso fursadaha ugu badan faa’iido uma lahan hadii linta looga dambeeyay. Kooxda Man United ayaa daqiiqadii 86-aad dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Marcus Rashford kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/1. Dhanka kale kooxda Chelsea oo ku ciyaaraysa garoonkeeda Stamford Bridge ayaa bar-baro lagu qabtay iyaga oo bar-baro la galay kooxda Sevilla. Labada kooxood ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed fiican laakiin aan wax gool ah ka dhalin kasta oo ay sameeyeen fursado wax ku ool ah oo goolal laga dhalin karo.
Xisbi shaaciyey inuu dhex dhexaadinayo DF iyo Shabaab + Warqad loo diray Erdogan
Muqdisho (Caasimada Online) – Xuseen Cali Cilmi waa guddoomiyaha xisbi la magac-baxay Taageerayaasha Mahdiga, waxuuna sheegay inuu u tartamayo madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan 2020/2021-ka.
Xuseen oo wareysi siiyey Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah, waxuuna sheegay in hadafka ugu weyn ee xisbigiisu uu yahay sidii loo heshiisiin lahaa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya.
Waxa uu sheegay inay bilaabeen sidii loo dhex-dhexaadin lahaa ururka Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya, isla markaana uu fariimo u kala diray hoggaamiyaha Al-Shabaab iyo madaxweyne Farmaajo.
Warqado uu soo bandhigay guddoomiye Xuseen waxaa ku qoran xabad joojin uu ku dhawaaqay xisbigiisa oo ka bilaabaneysa 1-dii bishii hore ee Sebtember 2020, kuna eg 31-ka December 2024-ka, taas oo la dhex dhigo dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab.
Waxa uu sheegay in dowladda iyo Al-Shabaab ay kala gaarsiiyeen warqadahaas, isla markaana uu u kala dhiibay Salaad Cali Jeelle oo la taliye u ah madaxweynaha Soomaaliya iyo nin ka tirsan Al-Shabaab oo teleefan uu kala hadlay.
Sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Taageerayaasha Mahdiga Xuseen Cali ayaa sheegay in illaa seddax jeer uu wacay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, basle uu ku demiyey taleefanka.
“Madaxweynaha waxaan helay watsapp-kiisa gaarka ah, waxaan wacay seddax jeer isaga oo online ah, balse waa uu igu deminayey oo igama qaban” ayuu yiri.
Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha Turkiga uu u diray warqad uu uga codsanayo inuu dhigo gogosha lagu dhex-dhexaadinayo Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya.
“Waxaan madaxweynaha Turkiga u diray qoraal aan uga codsanayo inuu gogosha dhigo, qorshuhu waxa uu ahaa in shan qof oo DF ka socota iyo shan kale oo Al-Shabaab ka socota ay Turkiga isugu tagaan, si loo amba qaado heshiis dhex mara labada dhinac” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Waxa uu sheegay in sanadkii 2004-tii uu ka mid ahaa musharaxiintii u taagneyd xilka madaxweynaha Soomaaliya, sidoo kale xisbigan ayuu sheegay in la aas-aasay sanad kadib 2005-tii.
Xuseen waxa uu sidoo kale sheegay in xisbigan uusan ka diiwaan gashaneyn guddiga doorashooyink oo shahaado aqoonsi ah uusan ka heysan dowladda Soomaaliya, taas bedelkeedna aysanba u baahneyn.
This post first appeared on Caasimada Online. Read the https://www.caasimada.net/xisbi-shaaciyey-inuu-dhex-dhexaadinayo-df-iyo-shabaab-warqad-loo-diray-erdogan/original article
Previous articleIsrael to ‘immediately’ bring over 2,000 Ethiopian Jews
Next articleLeBron James and the Lakers are NBA champions: ‘We just want our respect’
Labo Askari Oo Goordhaweyd lagu toogtay Muqdisho xilli ay…
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Dableey ayaa waxay maanta barqadii ku dileen Degmada Waaberi labo askari oo katirsanaa Ciidanka Dawlada. Kooxda dilka geysatay ayaa bistoolado ku hubeysnaa Dilka kadibna waa ay baxsadeen. Dilka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay Suuqa Beerta oo ah meel mashquul badan oo khudaarta lagu iibiyo. Meydka labada askari ayaa meesha laga soo qaaday daqiiqado kadib xaalada muddo ayey hakad gashay waxaana ay kusoo noqotay mid caadi ah. Ma ahan markii ugu horeysay oo askar ciidamada amniga katirsan lagu Dilo Gudaha Magaalada Muqdisho. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Wasaaradda Caafimaadka JSL oo Bulshada uga Digtay Halista Xannuunka Covid-19 Xilli Qaboowga
October 21, 2020 | Published by: yaska Wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa kulan ka yeelatay ka hortaga iyo xakameynta xannuunka Covid-19, ee xiliga qaboobaha, taasi oo halistiisu dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku sii kordhayso. Kulankaasi oo uu shirguddoominayay, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka udane Cumar Cali Cabdillaahi , islamarkaana ay ka soo qayb galeen masuuliyiin, agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda, kana qabsoomay hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka, ayaa lagaga hadlay u diyaar garowga iyo ka hortaga iyo xakamaynta xannuunka COVID-19 oo xiligan qaboobaha markale soo laba kacleelayay. Waxaana kulankani arrimaha sida gaarka ah diirada loogu saaray ka mid ahaa. Xaaruumaha daawaynta iyo daryeelka ee xanuunka Coronavirus. 2. Kor uqaadista aqoonta dhakhaatiirta iyo tababarka hawl-wadeenada ka hawl gala xaruumaha daawaynta bukaanka Coronavirus. 3. Dardargalinta iyo dib u habaynta xaaruumaha wicitaanka xidhidhka (Call Centers-ka). 4. Diyaarinta dawooyinka, gaadiidka, Oxygen-ta IWM ee ku filnaan kara baahiya bukaanka muhiimka u ah dawaynta. 5.Dardargalinta wacyigalinta & bararujinta Kahortaga & xakamaynta xanuunka Covid-19.Waxaanu kulankani ka mid ahaa kulamada sida joogtada ah uu wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku ula yeesho saraakiisha iyo hawl-wadeenada wasaaraddaasi. Gaba-gabadii waxaa ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ku wargelinaysa bulshada, iyada oo kaashanay warbaahinta in wakhtigan qaboobaha uu xannuunka Coronavirus uu markale dunida ku soo laba-kacleeyay, dadka dalka gudahiisa laga helayaana ay kordhayso, sidaasi darteed waxaa ay bulshada uga digaysa in ay ka feejignaadan halista xannuunkan safmareenka ah ee Covid-19. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka JSL ayaa deddaal adag ugu jirta buuxinta baahiyaha caafimaadka iyo horumarinta adeega caafimaadka. LA WADAAG ASXAABTAADA
12 Daqiiqadood ka horGabar u dhalatay Bangladesh oo hesata dhalashada Ingiriiska ayaa ku khasbanaatay inay dagaal ku wajahdo qoyskeeda kaddib markii ay si aan lagu farxin uga fal celiyeen uur ay u yeelatay nin madow ah.Salma waxay iyadoo cadheysan ka carartay guriga hooyadeed, kaddibna waxay dadaal u gashay inay nolosheeda dabarto. Laakiin hadda iyadoo 21 jir ah, labo bilood oo uur ahna leh, ayey hoy la'aan tahay. Albaabka guriga qoyskeeda wuu ka xidhan yahay, reerkeeduna sidaas ayeyba ku deyriyeen.Waxaasoo dhan sababtooda waa in iyadoo reer Bangladesh ah tahay ayna ku adkeysaneyso inay dhasho cunug uu aabbe u yahay nin madow ah. Dhaqan ahaan bulshadeeda, dumarka reer Bangladesh ilmo "kuma dhalaan" wax guur ka baxsan - iskaba daa inay guursadaan dad jinsiyado kale ah ama ay yeeshaan carruur midab madow leh.Habaryarteed ayaa subax dhan isku dayeysay inay ka dhaadhiciso sidii ay mar labaad ilmaha isaga soo xaaqi lahayd, maadaama markii koowaad ee ay uurka yeelatay ay iska soo xaaqday.Laakiin markan da'deedu am ahayn 18 sano. Maxay tahay xuquuqda ay u leeyihiin inay go'aankeeda u meeriyaan."Waxaan diyaar u ahaa inaan sameeyo wax kasta oo aan cunugteyda ku badbaadin karo. Haa, taas micnaheedu waa inaan ka samro qoyskeyga, inaan ka samro xirfaddeyda iyo inaan ka samro wax walba oo aan heystay. Laakiin waxaan dareemay in aysan jirin waddo kale oo ii furan," ayey tidhi Salma.Ka hor inta aysan Salma ka dhaqaaqin guriga reerkeeda, waxay aragtay hooyadeed oo illinta indhaheeda ka daadaneysa ay qoysay sabaayad ay qeyb ka cuntay."Waan ogahay inay jecleyd in cunuggan uu noqdo mid Bengali ah. Markaas waxay wici lahayd qoyska ninka aan jeclahay, waxay qorsheyn lahayd arooska, 'way sharciyeyn lahayd' wax walbana dhexda ayey u xidhan lahay."Laakiin cunugga aan caloosha ku wado aabbihiis waa nin madow ah.Inta aysan xubno kale oo qaraabadeeda ah culeys soo saarin, Salma waxay isaga soo carartay guriga reerkeeda, iyadoo gacanta kusoo qabsatay telefoon ay lahayd oo noociisu ahaa Nokia 3210. Ma aysan dooneynin inay ilmaha iska soo xaado, suuragalna uma ahayn inay lasii joogto qoys aan ku taageersaneyn inay cunuggeeda dhasho.Sheekada jacaylka ee Salma waxay ahayd mid cajiib ah. Wiilka wuxuu dagganaa guriga ku xiga albaabkooda, iyada ayaana atariishada ahayd oo isxakameyn weysay islamarkaana jeclaatay marka horeba. Laakiin filimada Bollywood-ka lagama yaqaanno Atoore madow ah.Inkastoo bulshooyinka daggan Koonfurta qaaradda Aasiya ay qarniyo badan dhibaato kasoo mareen cunsuriyad lagu sameynayay, naceybka midabka madow iyo fikirka lagu diiddan yahay dadka madowga ah wuxuu ku badan yahay bulshooyinka gobolkaas ku dhaqan.Ma jirin hal habaryar oo Salma markii ay yareyd ku dhahday, "Dadka madowga ah way xun yihiin." Balse nacaybka madowga wuxuu leeyahay hab kale oo loo maro iyo sheekooyin carruurta lagu soo abaabiyo ilaa marka ay aad u da' yar yihiin, sida in lagu dhoho "Ha u bixin qorraxda bannaanka, haddii kale waad madoobaaneysaa," ama "Gabar midabkeeda uusan madow ahayn ayaa durba la guursadaa."Hooyadeed waxay fikirka madow nacaybka ah soo billowday waagii ay Bangladesh ku nooleyd xilligii gumeysigaIngiriiska uu halkaas ka jiray. Xitaa waxay aad u necbaan jirtay dhaqanka ragga madowga ah oo ay ka aaminsaneyn mid xun.Salma oo 16 jir ah ayey ku dhihi jirtay: "Nimanka madow ujeeddadooda waa inay uur kuu yeelaan oo kaliya." Markii ay ogaatay inay gabadheeda isjeclaadeen wiilka dariska la ah waxay ku tidhi: "Nin madow ah qiimo fiican agtiisa kama yeelaneysid."Hadalka noocaas ah cid tidhi ma jirin markii wiilasha qoyska saddex ka mid ah ay guursadeen saddex gabdhood oo caddaan ah.Salma waalidiinteeda waxay London tageen 30 sano ka hor, kaddib markii ay kasoo qaxeen waddanka Bangladesh. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah furihii ay Salma heysatay ayaa ku shaeyn waayay albaabka hore ee gurigooda.Intii ay iyada iyo hooyadeed ku maqnaayeen safar xilliga fasaxa ah, aabbaheed ayaa baddalay qufulkii, halkaas ayeyna Salma iyo hooyadeed ku noqdeen hoy la'aan. Hooyadeed waxay ku khasbanaatay inay kaligeed korsato labo carruur ah.Xilligaas wixii kla dambeeyay bulshadii ay ka soo jeedday ayaa ku aflagaaddeyn jirtay inay garoob tahay - laakiin sidoo kale dadka aan reer Bangladesh-ka ahayn xitaa waxay ka ahayd ajnabi."Cabsida ugu weyn ee ay qabtay waxay ahayd in anigana ay igu dhacaan wixii iyada ku dhacay," ayey tidhi Salma."Haddana isla anigii ayaa ka hor imaaday, oo dhaqankeygii diiday, xirfaddeydii iyo wax kastana u burburiyay nin madow ah oo ay ka aaminsaneyd inuu iga rabo raaxo kaliya, guurkeygana uusan waxba ku faleynin, haddana iga dhalay gabar ay hooyadey aaminsan tahay inaan nolosheeda kaafin karin."Hal isbuuc kaddib markii ay cunugteeda dhashay, Salma waxay is aragtay iyadoo hor taagan guriga hooyadeed mar kale. Waxay arkeysay nalalka loogu talagalay dabaaldagga ciidda masiixiyiinta oo daaqadda lagu sharraxay, waxaana u soo carfay hilib digaag oo guriga laga kariyay. Iyadoo cabsi dareemeysa ayey cunugga si fiican marada ugu xajisatay, albaabkii ayeyna garaacday. Durbadiiba waxaa ka furay walaalkeed, cunuga ay gacmaha ku wadato ayuu si xun u qooraansaday, horay ayeyna usii gudubtay. Tolow sidey hooyadeed uga fal-celin doontaa cunuggan halka toddobaad jira?Waxay fariisatay miiskii cashada, cunuggiina waxay seexisay qol kale. Hooyadeed waxay iska ilaalineysay inay indhaheeda iyo indhaha gabadheeda isku dhacaan markii ay hilibkii digaagga u keeneysay. Islamarkiiba, oohinta cunuggii yaraa ayaa ka yeertay qolkii ku xigay. Salma waxay dareentay inayba tahay fursad fiican oo ay marmarsiiyo ka dhigato, laakiin hooyadeed ayaa celisay markii ay u dhaqaaqday: "Aniga ayaa u tagay." Wax yar kaddib oohintii way istaagtay. Hooyadeed ayaa cunugtii ay ayeeyada u ahayd markii ugu horreysay soo qabatay.Illin ayaa kasoo hoobatay Salma indhaheeda. Hooyadeed inkastoo ay fikir xun ka aaminsaneyd ninka gabadheeda ay ilmaha u dhashay, haddana wali way jecleyd. Taasina waxay xaqiijisay aqbalidda codsigii ay ku rabtay inay mar kale guriga qoyskeeda ugu soo laabato, caawinaadna ku hesho.."Maalmo gudahoodba, hooyadeey waxay cunugtii yareyd marsiisay dhammaan dhaqamada islaamiga ah, wayna u duceysay gabadheyda," ayey tidhi Salma.Sidaasoo ay tahay, kama aysan sheekeysanin waxyaabihii dhacay bilihii ay Salma ka maqneyd guriga.Shan isbuuc kaddib, musiibiyo ayaa dhacday.Salma waxay ogaatay in gacaliyaheeda uu muddadii ay wada socdeen oo dhan la socday haweeney kale, iyaduna ay cunug kale u dhashay.Waxaa rumowday cabsidii ay hooyadeed waligeedba ka qabtay ragga madowga ah, wax walbana waxay noqdeen sidii ay ka digeysay.Salma waxaa kasoo hartay aamusnaan, cadho iyo nolol qallafsan - walwal aad u badan ayaana soo wajahay."Hooyadey waxaa ku soo vaxday howl kale oo ah inay labo cunug xannaaneyso - aniga iyo gabadheyda. Labadeennaba hurdada ayey naga kicin jirtay, laakiin dadka dhan ayeyka qarin jirtay xaaladda aan ku sugan nahay." Salma waxay nolosheeda soo hagaagtay markii ay qortay gabay, waxbarashana dib u billowday. Jaamacad ayey ka qalin jabisay 7 bilood kaddib markii ay cunugteeda dhashay.Hooyadeed mar kasta way kasoo horjeedday go'aannada ay Salma ka qaadaneyso nolosheeda, gaar ahaan markii ay dib ugu laabatay gacaliyaheedii hore, meel gaar u ahna la dagtay.Tallaabadaas waxay qaadday islamarkii ay jaamacadda dhammeysay.Dhowrkii sano ee xigtay, nolosha Salma isbadallo kale oo lama filaan ah ayaa ku dhacay.Cunug kale ayey u dhashay isla ninkii hore, kaasoo markii dambena toos uga tagay, dibna aan ugu soo noqonin. Waxay billowday inay nolosha dib ula dhisato qoyskeeda iyo qaraabadeeda, kuwaasoo markii hore carruurteeda ku caayi jiray.Xitaa mid ka mid ah xubnaha qoyskeeda ayaa ka raalli galisay inay qeyb ka ahayd ololihii soo xaaqista ilmaha. Laakiin wali waxaan meesha ka bixin naceybka loo muujinayay madowga, oo si toos ah u saameynayay carruurteeda."Way iska caddeyd inuu kaa tagi doono, oo uu soo afjari doono waddada khaldaneyd," ayey tidhi hooyadeed. Dadka qaar ayaa u sheegi jiray in ilmaheeda ay ugu yaraan iyada shabahaan.Waxay mar walba isku dayi jirtay inay u sharraxdo sida ay saameynta xun ugu reebayaan hadalladaas lagu dhahayo.Laakiin intii ay Salma carruurteeda sii weynaanayeen waxay la qabsatay hadallada ay hooyadeed ugu muujineysay walaaca."Hadda waan arkaa sida ay xaaladda isugu baddashay jacayl iyo xannaaneyn," ayey tidhi.Ilaa hadda Salma mararka qaar ayey hooyadeed isku buuqaan iyadoo ka falcelineysa sida loogu colaadiyay go'aankii ay ku dooratay ninka madowga ah.Maalin maalmaha ka mid ah ayey tidhi Salma: "Waxa aad sidaas dhan u sameyneyso waa inuu midabkiisu madow ahaa sooma aha?""Maya," ayey tidhi hooyadeed oo isdifaaceysa. "Ma aha inuu madow ahaa, balse sababta waa inuusan Muslim ahayn. Nama uusan fahmi karin."Salma iyadoo argagaxsan ayey hooyadeed eegtay. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee ay hooyadeed u muujisay muhiimadda dhinaca diinta. Waxay niyadda iska weydiisay sababta waxba looga dhihi waayay saddexda haweenka ah ee aan muslimka ahayn, laguna soo dhaweeyay qoyska.Laakiin waxay u qaadatay in taasi ay tahay sida kaliya ee ay hooyadeed ku muujineysay fikirkeeda madow nacaybka ah, iyadoo aan si toos ah u qiraneynin.Sawirrada farshaxanka ah waxaa sameysay Tanzina Parisa Kabir
Haweeneeydi u dooneyd ee ay u ballansanaayeen inay is-guursadaan Saxafigi la dilay Jamal Khashoggi, iyo koox u doodda xuquuqda aadanaha oo uu isaga aas-aasay ayaa maxkamad ku taalla dalkaan Mareykanka u gudbiyay, dacwad ka dhan ah dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman. Dacwaddaan oo loo gudbiyay maxkamad rayid ah oo ku taalla magaalada Washington D.C, ayay Khadija Cengiz iyo kooxda Xuquuqda Aadanaha ee Arab World Nowku eedeyneysa Maxamad Bin Salman, inuu amray dilka wariye Jamal Kashikji, waxaa sidoo kale maxkamadda laga dacweeyay in ka badan 20 muwaadin oo u dhashay Sacuudiga oo dilka loo heysto. Ad Safaaradda Sacudiga ayaanan wali ka jawaabin dacwadda laga gudbiyay dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed Bin Salman. Amiir Maxamed oo loo soo gaabiyo MBS ayaa beeniyay inuu ka danbeeyay dilki lagu khaarijiyay saxafiga u dhashay Sacuudiga Jamal Kashoqgi, labadi bishii October ee sannadki 2018-ki. Koox ku dhow 20 oo isgu jira sirdoonka Sacuudiga iyo gacanyareyaasha Dhaxal-sugaha Sacuudiga ayaa dilka naxdinta leh u geystay weriye Jamal Kashoqgi, dilkaas oo ka dhacay Qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada ee istanbuul, Turkiga. Kashikji oo deganaa gobolka Virginia, ayaa maqaallo uu ku dhaliili jiray siyaasadda Maxamed Bin Salman ku daabici jiray, wargeyska Washington Post ee kasoo baxa Washington. Warar Xul ah
Muqdisho (Caasimada Online) – Dhowaan madaxda Soomaalida waxay ku heshiiyeen in marka kale dalka ay ka dhacdo doorasho dadban taasoo ka dhigan in ergooyiin la soo xulay ay dooran doonaan xildhibaannada barlamaanka. Halkii kursiba, musharrixiinta ku tartameysa waxaa u codeyn doona 101 qof, waxayna ka dhigan tahay in tirada guud ee codeynaysa ay gaareyso 27,775 Ergo. Doorashadii dhacday sannadkii 2016, waxa kursigiiba u codeeyay 51 ergo, waxayna tirada guud gaareysay 14,025 oo qof. Tobannaan ka mid ah ergooyinkii codeeyay doorashadaas ayaa lagu dilay magaalooyin kala duwan afartii sanno ee la soo dhaafay, kuwa badan oo ka mid ahna wadanka way ka carareen, halka boqollaal kale ay markii dambe cafis weydiisteen ururka Al-Shabaab si ay uga nabad galaan ugana badbaadaan dil. 2019 kii, Al-Shabaab waxay dhowr goobood oo kala duwan oo ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ku soo bandhigtay boqollaal qof oo ay ku sheegtay in ay ka tirsan yihiin ergooyinkii iyo nabadoonnadii soo xulay ama ka qaybgalay doorashadii 2016-kii, kuwaas oo ay ku tilmaantay inay ka tawbad keeneen fal gaalnimo ah oo ay ku dhaceen isla markaana ay balan qaadeen inaanay dib ugu laaban doonin doorasho kale. Damaanadda dhanka amniga ergada Dad badan ayaa is weydiinaya cidda damaanad qaadaysa amniga ergooyinka wax dooran doona iyo nabadoonnada ergooyinka soo xuli doona ee doorashada hadda la filayo, kuwaas oo tiro ahaan ka badan kuwii 2016. Nabadoon Maxamad Xasan Xaad oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhaqanka ayaa rumeysan in la dayacay amniga ergooyinkii wax doortay sannadkii 2016-kii, taas oo ay ahayd in dawladdu masuuliyad gaar ah iska saarto. “Horta in ILAAHAY qadaro dhimashada iyo nolosha labadaba marka laga reebo, wax dadaala oo aan isleeyahay dawladda way u diyaarsan yihiin ama ergooyinka laftigooda oo horey uga fikireen ma jirto, marka dadkaas waxan ku aqaana si hawtul hamag ah ay Meesha ku tagaan. “Ka dib markay xildhibaannada doortaan dee culeyskeedey leedahayo, markiiba waxay la kulmaan werwer iyo cabsi iyo wax aan la xisaabi karin oo amaan darro ah,” Ayuu yiri nabadoon Xaad. Balse booliska Soomaaliya oo u xil saaran amniga guud ee doorashooyinka ayaa ku adkeysanaya in ay diyaar u yihiin inay ilaaiyaan amniga cid kasta oo ku lug yeelan doonta doorashada soo socota. Afhayeenka Booliska Soomaaliya, Gaashaanle Sidiiq Aden Cali, ayaa sheegay in uu socdo qorshe ballaaran oo dhinaca amniga ah oo ku aadan doorashada iyo dadka ka qaybgalaya. “Hadda waxan wadnaa qorshe, kulama wadaagi karo qorshuhu siduu wada yahay, wajiyadiisa iyo sida hannaankiisu wada noqonayo, laakiin waxan kuu sheegi karaa in amniga qorshihiisa uu meel fiican marayo.” “Waa waajib in umadda Soomaaliyeed ogaadaan in doorashada nagu soo socota kaliya aan dareenka la siin iyo siyaasadda ee mid ka weyn la saaro amniga, marka waxan kuu sheegi karaa in qorshuhu meel fiican marayo aana rajaynayo sida ugu haboon in doorashooyinka u dhacaan dhanka amaanka,” ayuu yiri Gaashaanle Sidiiq. Khubarada amniga ayaa rumeysan in casharo muhim ah laga baran karay wixii qabsaday ergooyinka ee lahaa dilka handaada iyo caga jugleynta ee uga imaanaysay Al-Shabaab. Xuseen Macalin oo ah agaasimaha machadka Hiraal ee ka faalooda arrimaha amniga ayaa sheegay in casharada laga baran karay wixii dhacay ay ka mid ahaayeen inaan lagu laaban isla doorashadii 2016. “Casharada laga baran karay waxay ahaayeen in doorasho aan noocan ahayn oo tirada intaan ka badan, oo aysan Al-Shabaab u suuragali karin in ay shakhsiyaad ay xogtooda ku kala fahmi karaan ama ku bartilmaameedsan karaan, in laga badiyo oo waxay ahayd in laga dhigo hal qof iyo hal cod – tii aan saxda ahayn mid u dhawdhaw – nasiib daro fursadihii iyo wixii la hayayba waxay ku soo gabagabeen in doorasho tii 2016-kii u eg lagu soo celiyo. Hay’adaha amniga ayaa aaminsan in qaladaadkii dhacay wax laga bartay isla markaana qorshayaasha la dajiyay lagu saleeyay wixii horey loo bartay. Isha: BBC
Wax ka Ogoow Musuq maasuqa ka dhacay Wasaaradda Caafimaadka Soomaliya!! (Dhac aan qarsoonayn) !!
Updated on October 21, 2020 11:02 am